Badda Soomaaliya Archives - Sawirrotv
Tag Archive for: 'Badda Soomaaliya'
Xeer ilaaliyaha Guud ee Qaranka oo Sheegay in Kenya la siin doono 6 Bilood oo ay ku soo Jawaabto (VIDEO)
February 04, 2017 – Xeer ilaaliyaha guud ee Qaranka Soomaaliya, Dr.Axmed Cali Daahir ayaa waxa uu ka hadlay guushii Soomaaliya ay ka gaartay muranka Dacwadda Badda ee u dhaxeysa iyada iyo dowladda Kenya. Xeer ilaaliyaha Qaranka ayaa sheegay in muranka Dacwadda uu soo socday mudo Labo sano ah, go’aankii ugu horeeyayna uu soo baxay Khamiistii, …
DAAWO: Sawirrada Banaanbixii Maanta Lagu Qabtay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
February 03, 2017 – Waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay banaanbax lagu taageerayay guushii Soomaaliya ay ka soo hoysay muranka Dacwadda Badda ee u dhaxeysay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, kadib markii Maxkamadda ICJ ay ogolaatay in ay qaado Dacwadaasi. Mas’uuliyiinta Gobolka Banaadir oo uu ugu horeeyay Guddoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasada iyo amniga Gobolka Banaadir …
Soomaaliya oo Maanta Guushii u Horeysay ka soo Hoysay Muranka Badda ee Soomaaliya iyo Kenya (VIDEO)
February 02, 2017 – Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Holland, ayaa maanta aqbashay inay u gudo gasho dacwadda Soomaaliya ay gudbisay ee ku saabsan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Soomaaliya ayaa horay ugu gacan seyrtay soo jeedintii dowladda Kenya ee ahayd in heshiiska Is-afgaradka uu yahay mid …
Maxkamada Caalamiga ah ee ICJ oo Sheegtay Inay Go’aan ka Gaartay Dacwada Badda Soomaaliya iyo Kenya, Dhawaana Shaacin Doonto.
January 21, 2017 – Maxkamadda caalamiga ah ee (ICJ) ayaa sheegtay iney shaacineyso go’aanka ay ka gaartay diidmada hordhaca ah ee dowladda Kenya ay ka soo gudbisay in maxkamada caalamiga ah aanay geli karin kiiska Badda Soomaaliya iyo Kenya. Guddoomiyaha Maxkamadda ayaa ku dhawaaqi doona go’aanka Maxkamadda Galabnimada Khamiista, oo ay bisha Febraayo tahay 2-da …
Baaritaan Cusub: Ma suurto Gal baa in Kenya ay ku Guulaysato Muranka Badda (VIDEO)
Muranka dhanka badda ah ee u dhaxeeya Dalalka Soomaaliya iyo Kenya, ayaa hadda ah mid horyaala maxkamada caalamiga ah ee ICJ-ga ee dalka Netherland, hadaba wel welka ugu weyn ee weli jira ayaa waxa uu yahay in Kenya ay keli ku ahayn soo haweysashada Badda Soomaaliyeed oo ay jiraan Shaqsiyaad Soomaaliyeed iyo dalal shisheeye oo …
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo mar labaad Laga Waraystay Muranka Badda Qayraadka ku Jira (Dhagayso)
September 24, 2016 – Cabdi Ismaaciil Samatar oo ah Prof. Soomaaliyeed ayaa mar labaad waxaa laga waraystay inuu Sharaxaad kooban ka bixiyo Muranka Badda ee u dhexeeya Soomaaliya Iyo Kenya, wuxuuna shaaca ka qaaday qayraadka ku duugan badda Soomaaliya iyo damaca ka galay Kenya. Waxaa dalka Holland maalmitii shalay oo jimce ahayd lagu soo gaba-gabeeyay dhegaysiga …